ၸၢႆးၸၢႆးၶမ်းလႅင် - ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Infobox အတ္ထုပ္ပတ္တိ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် (Sai Sai Kham Leng) ကို တောင်ကြီးမြို့တွင် ၁၉၇၉ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ၏အဖိုးသည် မိုင်းပွန်စော်ဘွားကြီး စဝ်စံထွန်း ဖြစ်သည်။ သူ၏ အမေသည် ၂၀၀၆-ခုနှစ်၌ ဩစတေးလျတွင် နေထိုင်သည်။ ညီမနှစ်ယောက်နှင့် ညီတစ်ယောက်ရှိသည်။ တောင်ကြီး အ.ထ.က (၁)၊ ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)‎များတွင် ပညာဆည်းပူးခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
သူ၏ အနုပညာခရီးလမ်းကို ၁၉၉၆-ခုနှစ်တွင် မော်ဒယ်ဘွိုင်း တစ်ယောက်အနေဖြင့် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ စိုင်းစိုင်းသည် ဇွန်လွင် မော်ဒယ်အေဂျင်စီတွင် မော်ဒယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင်လှုပ်ရှားရင်း သက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုခဲ့သည်။ သူ၏ ဂီတလှုပ်ရှားမှုများကိုလည်း စတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀ဝ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လတွင် သူ၏ ပထမဦးဆုံး တေးစီးရီး ချောကလက်ရောင် ရေခဲအိပ်မက် ထွက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုစီးရီးသည် ပရိသတ်များအကြား သိပ်ပြီး ပျံ့နှံ့ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ နောက် ၅-လအကြာတွင် Hip-Hop အဖွဲ့သစ် ACID သည် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် အောင်မြင် ခေတ်စားသွားသည်။ ACID ၏ သီချင်းခွေထဲတွင် စိုင်းစိုင်းက “ဘဝ ဘဝ” သီချင်း တွဲဖက်သီဆိုပါဝင်ခဲ့သဖြင့် Rap ဆိုသူတစ်ယောက်အဖြစ် အောင်မြင်မှုကို အစပျိုးနိုင်ခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် ကောင်းမြတ်လေး (Lil' Kaung Myat) နှင့် တွေ့ဆုံမိသည်။ သူတို့ ပထမဦးဆုံး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပြီးနောက်မှာ စိုင်းစိုင်း။ ကောင်းမြတ်၊ ငယ်ငယ် သုံးယောက်တွဲပြီး သီချင်းတွေဆိုဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်၍ အမြဲတမ်းဂေါ်လီ(အဲဗားဂေါ်လီ) အခွေထွက်သည်။ လက်ရှိနောက်ဆုံးထွက်ရှိခဲ့သောခွေမှာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲဖြစ်သည်။ ၂၉.၁၂.၂၀၁၄ နေ့တွင် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲခွေ ဒီဗီဒီ ဖြန့်ချီသည့် အမှတ်တရပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ Junction Square ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ အောင်မြင်မှုရခဲ့သည်။
2 ထွက်ရှိထားသော သီချင်းခွေများ
2.1 တစ်ကိုယ်တော် ခွေများ
ပြင်ပဘဝ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ထွက်ရှိထားသော သီချင်းခွေများ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
တစ်ကိုယ်တော် ခွေများ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
အတွဲခွေများ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
စာရေးဆရာ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
↑ Wutt Hmone and Pyae Phyo Tayza's Couple Photos Leak Out - Myanmar Celebrity: Gossip, News, Video, Photo, Fashion, Entertainment. Myanmar Celebrity (2011-06-05). Retrieved on 2014-07-19။
ဝက်ဘ်ဆိုက်လင့်များ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]